Lalao yeti fihetseham-po aterineto. Play maimaim-poana
Lalao yeti fihetseham-po an-tserasera
Na izany aza mandrora farany
YetiSports: Fanamafisana ny tombokase
Notisports: Albatross be loatra
Bunny toy izany Run
Zombies nihinana rehetra
Zava-bita tsy manam-petra tsy hita fetra
Letaha Bob 5: Love Story
Lalao Online Fahaiza-manao Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny ankizivavy Games ho an'ny ankizy Yeti (Yeti). Yeti Sports Fahaiza-manao Games Collection entana Nanomboka Games izay tsy maintsy mihazakazaka Efijery kasihina Html5 Begalki Android Android apk null
yeti fihetseham-po (yeti sensation ):
Mpahay siansa nanapaka ny lohany sy ny hoarse mifamaly raha misy Yeti raha ny marina, na dia izany ny tantara foronina sy ny tsaho. Maro no resy lahatra momba ny fisian'ny ny malaza humanoid zavaboary, angano sy tantara ny mahery fo, raha tsy isan ' ny tena tsy mino, ka mankanesa any amin'ny tontolo virtoaly, izay ny zava-drehetra dia explainable sy mora azo. Afaka manome ny valiny mazava - Bigfoot misy ary na dia hampahafantatra anareo ho any amin'ny mahafatifaty toetra, rakotry amin'ny lohany ny paladia mena volo matevina. Ny tenantsika no nahita izany vao haingana, rehefa nanapa-kevitra ny maro loko Bigfoot mba avy amin'ny ranomandry lava-bato, izay mitoetra. Asehoy azy nanao fofona manitra frezy izay wafted niala tamin'ny lalana, hita tsy lavitra teo. Huge refrigerated kamiao mitondra entana Mitana ny voankazo sy ny legioma, ny varavarana misokatra tampoka ary roa baoritra ny voaroy dia voafafy teny amin'ny ny lalana. Yeti faingana mba hanangona ny frezy mandra- niraikitra tanteraka, fa avy eo dia nanomboka mahantra tanteraka fihazana. Vahoaka mpihaza matihanina sy matianina nanomboka mifaninana mba hametraka fandrika sy ny vato misakana, miezaka ny hanakana ny mandositra bibidia ka hisambotra azy velona ho voalohany nihaza mirehareha tsy fahita firy amboara. Aza avela ny villains fahafahana hanampy betsaka unimpeded hazakazaka manodidina ny ranomandry lalana, hanangona ny vkusnyashek sy finesse napetraka fandrika, antontan- hazo, vato sy sakana hafa. Aza miezaka ny ho namana ny mahery fo, ary ny famindram-po ho an'ny fotsiny, angamba, dia mankasitraka azy io, ary homeko anao ny fanadihadiana manokana. Fanaraha-maso ny totozy, ny fanaovana ny tsara tarehy Bypass vato misakana, manangona tsy ny masaka voaroy, fa ilaina ihany koa ny tombontsoa. Raha handray ny balafomanga, dia hamela ny maherifo mba hitifitra ny fiaramanidina hafainganam-pandeha ary tsy misy baoritra amin'ny grids, fanakanana ny lalana, tsy misakana. Mitandrema ianareo, fandrao ho mihazakazaka barika feno fako radiôaktifa, snowmen, mena bokotra, ampiasaina amin'ny toerana mampidi-doza amin'ny alalan'ny mitsambikina. Ao amin'ny voaangona frezy, dia afaka atakalo isan-karazany ilaina vokatra: fiarovan-doha tantanana, mampahazo aina kiraro, stylish fohy ary hiverina toy ny boriki- zavaboary ao amin'ny tena iray mandroso fikambanana.